Waa Maxay Yirridka iyo Calaamadaha Lagu Garan Karo? |
Miski Cabdinuur Salal — February 12, 2019
Yirridka waa cudurada ugu caansan oo ku dhaca cirridka. Waxaa sababo bakteeriyo ilmo aragta ah. Yirridka waxa uu ku sababaa qofka inuu ka dareemo cirridka: – cun –cun , gaduudasho, iyo barar .
Haddii aan la daaweyn infekshankaan waxa uu keeni karaa xaalad adag taas oo sababi karto ilkaha dhamman in ay daataan. Baddanaa waxaa ay bakteeriyadaan ku kortaa harraaga cuntada oo mudo badan ku jirro ilkaha dhaxdood.
Haddaba Kaallay Aan Isla Aragnee Calaamadaha Lagu Arki Karo Yirrida:
b- Barrar lagu arki karo Cirridka
t- Afka oo yeesho shiir
j- Damqasho ilkaha xagooda ah in la dareemo
x- Qofka oo isku arko dhiigg marka uu caddaysanaayo
Yaa Halis Ugu jiro Yirridka In uu Ku Dhaco , Siddee Ayaan Oga Hortagi karnaa Yirridka?
b- Dadka ay liidato naafada ilkaha
t- Da’ahaaan qofka ka wayn 65
j- Dadka afka qalallan war walba, halis ayeey ugu jiraan in uu ku dhaco yirridka
x- Dadka cabbo sigaarka
kh- Dadka uu daciifka yahay difaaca jirkooda
d- Fir ayuu ku imaadaa marrarka qaar – sidda qofka oo ka dhaxla waalidkiisa
r- Daawooyinka qaar ayaa keenni yirridka
s- Dadka qabo cuddurka macaanka waxa ay halis ugu jirraan yirridka.
sh- Isbadalka hormoonada waxa ay keenni karaan qofka in uu ku dhac yirridka
dh- Joogtaayta naadafada ilkaha, waxa ay qeeyb wayn ka qaadataa ka hortaga yirridka
c- Booqashada dhaqtar ilkood waxay ka hortagtaa yirridka
g- Cunista cunto isu dheelitiran waxa ka hortagtaa yirridka
Tags: Waa Maxay Yirridka iyo Calaamadaha Lagu Garan Karo?
Next post Dabbaasha Cunnuga Ku Jira Caloosha
Previous post Habeen Kasta Seexo 8 - 9sac., Cabsidana Jooji